जाडोमा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्याबाट कसरी बच्ने ? - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
जाडोमा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्याबाट कसरी बच्ने ?
डा. नविन कुमार मिश्र, छाती रोग विशेषज्ञ
गर्मी मौसमको तुलनामा जाडो मौसममा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या बढि देखिने गर्छ । पहिले देखि नै श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोग भएका व्यक्तिहरूमा जाडो मौसममा झन् धेरै समस्या बढ्ने गर्छ ।
जाडो आफै पनि श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या बढाउने प्रमुख कारण हो । जाडोमा झ्याल ढोका थुनेर बसिन्छ, हिटर तापिन्छ । हिटरले कोठाको तापक्रम त बढाउँछ त्यसको साथै कोठाको मोस्चर पनि घटाइ दिने हुन्छ जसले नाकमा नै सुख्खा हुन्छ र राम्ररी काम गर्न पाउँदैन जसले गर्दा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या बल्झिन्छ ।
दोस्रो कारण झ्याल ढोका थुनेर बस्दा भेन्टिलेसन राम्ररी हुँदैन । जसले गर्दा पनि श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्याहरु बढ्छ ।
जाडोमा मौसममा प्रदूषण पनि बढी हुन्छ । त्यो प्रदूषणले प्रत्यक्ष असर हाम्रो श्वासप्रश्वास प्रणालीमा पार्ने देखिन्छ । यस समय सङ्क्रमणको जोखिम हुनुको साथै मुटु बिरामीका लागि पनि यी मौसममा विशेष स्वास्थ्यको ख्याल राख्नु पर्ने हुन्छ । न्यून तापक्रममा श्वासप्रश्वासमा कठिनाइ हुने, रुघाखोकी लाग्ने, सङ्क्रमण हुने पनि समस्या बढ्छ ।
– प्रदूषित क्षेत्रमा जान सकेसम्म नजाने
– निमोनियाबाट बच्न खोप लगाउने
– सामाजिक दुरी कायम राख्ने
– सङ्क्रमणबाट बच्न मास्कको प्रयोग गर्ने
– घाम लागेको पछि मात्रै हिँडडुल गर्ने
– शरीरलाई न्यानो बनाएर राख्ने
– झ्याल ढोका बन्द गरेर हिटरको प्रयोग नगर्ने
– कोठा तातो भइसकेपछि हिटर बन्द गरेर मात्र सुत्ने
– प्रशस्त पानी पिउने
– खानामा विशेष ध्यान दिने सन्तुलित तथा स्वास्थ खाना खाने
यस्ता हुन्छन् युरिक एसिडका लक्षण, कसरी बच्ने ?
यस्ता कारणले देखिन्छ डरलाग्दो सपना - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
[…] – बालबालिका र किशोरकिशोरीमा पनि यस्तो समस्या बढी देखिन्छ । बढ्दो उमेरमा हुने मानसिक परिवर्तन र कमजोर मनोविज्ञानका कारण उनीहरूमा यो समस्या हुन्छ ।यो पनिनिद्रा लागेन ? तुरुन्तै निदाइन्छ यस्ता विधिलेजाडोमा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्य… […]
चिसोमा हृदयघातको जोखिमबाट कसरी बच्ने ? - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
[…] जाडो मौसममा हाम्रो शरीर र मुटुलाई शरीरको तापक्रम बढाउन बढी मेहनत गर्नु पर्ने हुन्छ । जसको कारण मुटुमा बढी दबाब परिरहेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा मुटु कमजोर भई हृदयघात हुने जोखिम बढ्छ । त्यसैले चिसोमा हृदयाघातको जोखिम कम गर्न यी कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ । […]